Jubbaland oo Cabsi weyn ka muujisay Ciidan la sheegay in ay u goosteen DF. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Jubbaland oo Cabsi weyn ka muujisay Ciidan la sheegay in ay u...
Kismaayo (Caasimadatimes)-Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka hadlay Ciidamo dhawaan sheegay in ay ka goosteen maamulka Jubbaland ayna ku biireen dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Previous articleSAWIRO:-Banaanbax gilgiley Magaalada Gaalkacyo. Maxaa soo kordhay?
Next articlePuntland oo ku dhawaaqday arin ay shacabka puntland aad u soo dhaweeyeen kuna wajahneyd Xaalada bosaaso.
(Daawo)-saameynta khilaafka ka dhasahay Muxaadaradii la joojiyey ee Sheekh Umal
DEGDEG:Ciidamo ka goostay Jubland iyo Axmed Madoobe oo jabweyn soo gaarey.